के एडोब साइटग्यालिस्ट स्टीम हराइरहेको छ? | Martech Zone
मङ्गलबार, अक्टोबर 2, 2012 बिहीबार, फेब्रुअरी 25, 2016 Douglas Karr
हामीसँग Adobe SiteCatalyst मा केहि ग्राहकहरू छन् ... तर म निश्चित छुईन कि मञ्चमा कति जना वास्तवमा मञ्चमा छन् र यसलाई राख्न कति योजनाहरू छन्। अन्य साइटहरू जस्तै साइटग्यालिसिस्ट विश्लेषण प्लेटफर्महरू, भ्रमण डाटाको संख्यामा सीमित राख्नुहोस् - जो कोही ईन्टरप्राइज प्रणालीको लागि ठूलो पैसा खान्दै छ को लागी एक ठूलो नुकसान। र जब देखि Adobe ले तिनीहरूलाई निल्यो, यो उस्तै कम्पनी जस्तो देखिदैन।
म यस बारे मा उत्सुक थिए र केहि खोज प्रवृत्तिमा एक नजर लिएँ। सम्भाव्यता र प्रयोगकर्ताहरूले एक प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने क्रममा उनीहरू अधिक खोजी गर्न रुचाउँदछन्। यस अवस्थामा, साइट उत्प्रेरक र ओम्न्युचर खोजहरू तल झर्दै प्रतीत हुन्छ। कुनै श doubt्का छैन कि गुगल एनालिटिक्स यी सबै विक्रेताहरु चबाउँदैछ - तर ओम्न्युचर थोरै समयको लागि फरक थियो। उनीहरूको ग्राहकहरुको विकास गर्न उनीहरूलाई निरन्तर सहायता दिईरहेको हुनाले उनीहरूको पेशेवर स्टाफ लगानीको लायक थियो। मलाई थाहा छैन कि अब अरु के हुँदैछ।
म जस्तो विक्रेता अज्ञेष्टिक परामर्शदाता शायद सायद मद्दत गर्दैन। मलाई साइटग्यालिसिस्टसँग काम गर्नमा कुनै आपत्ति छैन, तर ग्राहकहरू हामीसँग वास्तवमै यसका साथ केहि शानदार गरिएको छैन। चाचाले पृष्ठको क्षेत्रबाट केहि राम्रो विश्लेषण गरे जुन उनीहरूलाई थाहा थियो कि कुन सामग्री आकर्षित भइरहेको थियो र सब भन्दा धेरै आगन्तुकहरूलाई राखीरहेको थियो ... तर त्यो चाहिएको भए पनि गुगलका साथ गर्न सकिन्छ।
साइटग्यालेस्टले केहि ठोस मोबाइल, सामाजिक र भिडियो एकीकरणहरू प्रदान गर्दछ ... तर त्यो वास्तवमा कुनै पनि भिन्नता छैन कि त। एउटा सुविधा जुन साइटग्याल्यास्टलाई खेल परिवर्तनकर्ताको रूपमा देख्न सकिन्छ त्यो कार्यप्रवाह हो:
सहज उपयोगकर्ता ईन्टरफेस quickly चाँडै र सजीलो कुञ्जी अनलाइन मार्केटिंग अन्तरदृष्टि प्रकट गर्नुहोस्।
वास्तविक समय उपलब्धता your तपाईको आईप्याडबाट डाटा पहुँच गर्नुहोस्। स्क्रोल, स्वाइप, र विशेष समय अवधिको लागि जूम। साधारण टचको साथ नयाँ मेट्रिक्स वा ईमेल रिपोर्टहरू थप्नुहोस्।
स्वचालित निर्णयहरू key कुञ्जी मेट्रिक्स अपेक्षाहरू भन्दा बढि वा गिरावट हुँदा घटना ट्रिगरहरूको स्वचालित सूचना सेट अप गर्नुहोस्।
तिम्रो के बिचार छ? के तपाईं एक कम्पनी हुनुहुन्छ जसले एडोब साइटग्यालिस्ट छोड्नुभयो? के एनालिटिक्स केहि कुरामा तपाईंले लगानी गर्नुभयो? मेरो विचारमा, यो प्लेटफर्मको बारेमा कम हो र कम्पनीको बारेमा बढि तपाईंलाई सफल बनाउन मद्दत गर्दछ। वेबट्रेंडहरूमा मानिसहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा काम गरिसकेपछि, मलाई थाहा छ उनीहरू आफ्ना ग्राहकहरूको कत्ति ख्याल राख्छन्। SiteCatalyst ग्राहकहरूसँग काम गर्दै, म पक्का छुइन कि मैले कहिल्यै Adobe खाता व्यवस्थापकसँग कुरा गरेको छु!
टैग: एडोबएडोब साइटकाट्यालिस्टसर्वव्यापीसाइटकाट्यालिस्ट
टिक्सी: सरल, सस्तो सास ग्राहक समर्थन
कम्प्यूटर मर्मत पोर्टलैंड
म इमान्दार हुनेछु, मलाई लाग्छ कि एडोबले एडोब फ्ल्याश मुद्दाहरूको कारणले धेरै जमिन हराइरहेको छ। जबकि मलाई थाहा छ वेबसाइटहरू यसबाट टाढा गइरहेका छन्, त्यहाँ अझै धेरै यति धेरै छन् कि समात्नु पर्छ। तपाईंसँग त्यहाँ निराश प्रयोगकर्ताहरू छन्। जबकि डिजाइन प्याकेजहरू महान छन् ... यस वाहकले मलाई महसुस गर्छ स्थितिलाई असर गरिरहेको छ
यो निश्चितको लागि राम्रो दाग रहेको प्रवृत्ति हो। LVMetrics मा, हामी ग्राहकहरूको साथ बृहत रूपमा काम गर्छौं जसले बढि Google एनालिटिक्सको सम्भावनालाई बढ्ता अनुभव गरीरहेछन् जब प्रयोग गरीन्छ र उचित रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तर्क अब मूल्यको बारेमा पनि छैन, यो साकारै देखिन्छ कि त्यहाँ केवल यति धेरै जानकारीहरू छन् जुन वेब एनालिटिक्स उपकरणबाट अर्थपूर्ण रूपमा खपत गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि, Google एनालिटिक्स ठीक काम गर्दछ। शक्तिशाली अनुप्रयोगहरू गुगल एनालिटिक्स एपीआई प्रयोग गरेर निर्माण गर्न सकिन्छ विजिटर लेभल एनालिटिक्स - यस्तो चीज जुन ओम्न्युचर लामो समयदेखि बेजोड बिक्री बिन्दुको रूपमा टाउटिing गर्दै आएको छ। छनौट वास्तवमै एससी, 'बनाम सीमित GA ट्र्याकि + + परामर्श, डाटा जादू र ETL को एक बिट सुविधाहरू बीच' बक्स बाहिर 'सुविधाहरू बीचको तुलना गर्न तल उकिन्छ। पछिल्लोले ह्यान्डडाउन जित्यो।